Umbiko we-NFT: U-2021 unyaka wokukhula okuhle - i-Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Umbiko we-NFT: U-2021 unyaka wokukhula okukhulu
Tag: ethereum, ama-lavalabs, I-Meebits, NFT
Sifunde umbiko wakamuva we-Nonfungible, onikezelwe emhlabeni we-NFT.
Ingabe siyethemba i-Nonfungible? Ngingubani? Isungulwe ngo-2018 ekuqaleni ukuze ilandelele ukuthengiswa kwesikhathi sangempela kwe-Decentraland, inkampani ithuthukile futhi namuhla ingenye yezinsika eziyinhloko ze-Non-Fungible Token ecosystem njengenye yedatha enokwethenjelwa kakhulu nezinkomba zezibalo emakethe ye-NFT.
Balandelela ukuthengiswa kwempahla ehlukanisiwe ngesikhathi sangempela ku-Ethereum blockchain futhi banikeze amathuluzi okusiza abathanda i-NFT, imikhomo nezingcweti zokuqapha ukuvela kwezimakethe ze-NFT.
Umbiko umahhala futhi ungawulanda kuleli kheli. Idatha ayiqambi amanga. Umbiko wabo we-Q2 uhlola izitayela ze-NonFungible Token ku-chain ye-Ethereum.
Phakathi nale kota eneziyaluyalu, imboni ye-NFT ihlangabezane nokukhuphuka okukhulu komsebenzi lapho abasebenzisi abasha bengena emphakathini we-NFT okokuqala ngqa. Ezinyangeni ezintathu ezedlule, sibone abezindaba abajwayelekile bebeka ama-NFTs esicongweni, okunikeza imboni ukuchayeka okuhle kakhulu, kodwa futhi ikhuthaza ukuhamba kukayinki, izala amaciko amasha namaphrojekthi.
Singasho ukuthi wonke amarobhothi aluhlaza.
Uma kuqhathaniswa nonyaka odlule noma ikota edlule, kwathengiswa amadola engeziwe, inani labathengi nabathengisi lenyuka, futhi inani lezikhwama zemali zeviki ezisebenzayo lenyuka. Lo mkhuba uyingxenye yokukhula okuqinile kuzo zombili izimboni ze-NFT kanye ne-cryptocurrency kusukela ngoSepthemba 2020.
Naphezu kwevolumu ye-USD iphansi kunasekuqaleni kwekota, ivolumu yokuthengisa ibone ukwanda okunamandla. Ingxenye yokuqoqeka ilawula kakhulu imakethe kule kota. Ukuqhuma kwevolumu ye-USD ngoMeyi kwakungenxa yokwethulwa kwephrojekthi ye-Meebits yezibungu.
Kuyo yonke imikhakha, imboni yezinsiza ithuthuke kakhulu ezinyangeni ezintathu ezedlule. Njengoba lezi zimo zokusetshenziswa kwe-NFT zingandile, zicabangela ngokucophelela ukuthi lesi siginali ingaba umkhuba.
Lawa ma-NFT angaqondakali ...
Isihloko sangaphambiliniIndawo Yemakethe yeBinance NFT: Amaqoqo ka-Andy Warhol, uSalvador Dalì
Isihloko esilandelayoI-NFT: Umhlahlandlela ophelele wokuthola i-100x elandelayo!